guul Goobta Shaqada | Shaqooyinka iyo khayraadka mustaqbalkiisa ciyaareed ka USAHello | USAHello
Waxaa jira waxyaabo aad sameyn kartaa shaqo kasta si ay u caawiyaan in aad ku guulaysato oo si wanaagsan u sameeyaan shaqada. halkan waxaa ku qoran 10 Talooyin kaa caawinaya in aad guul goobta shaqada, wax alla wixii aad shaqo.
Hambalyo helitaanka shaqo! Sida ugu dhakhsaha badan aad bilowdo, aad shaqo fiican qaban. Muuji Tababaraha in aad tahay shaqo adag si aad dhiirigelin karaa mustaqbalka.
Waxaa jira qaar ka mid ah waxyaabo kale oo aad samayn karto in shaqo kasta si loo gaaro guusha goobta shaqada.
1. Haddii aadan fahmin, shirkadda aad u shaqayso
Waa caadi in wax fahmin. Haddii aadan fahmin, u sheeg Tababaraha kooxda. Haddii aad u baahan tahay si aad u weydiiso dhowr jeer, sii weydiinaya. Haddii qaxooti kale ah ama soo galooti ka shaqeeyaan shaqada, waxaad ka codsan kartaa inuu kaa caawiyo kuu turjumo. shaqo-American waxaa loo isticmaalaa in su'aalo, gaar ahaan marka aad tahay qof cusub. Waydiinta su'aalaha iyaga muujinaysaa in shaqo fiican qabanayaan waa muhiim inaad.
2. Had iyo jeer ay wakhtiga
In waqtiga ay muhiim u tahay guusha goobta shaqada ee USA. Tusaale ahaan, haddii aad shaqada ka bilaabantaa 3:30 pm, waa inaad shaqada, gashan oo diyaar u ah inuu ku soo bilowdo ka shaqeeya by 3:25 pm. Noqo saaxiibtinimo oo waxaad ku tidhaahdaa hello in co-workers marka aad soo gasho. Laakiin ha waqti badan ku bixiya la hadalka dadka kale ma in subaxdii. Dadka Maraykanka badidoodu bilaabin shaqada sida ugu dhakhsaha badan ay u hesho in ay shaqo.
3. Tag maalin kasta in aad jadwalka shaqeeyaan
Hubi jadwalka shaqada aad todobaad kasta iyo yimaado oo shuqulka marka la qorsheeyay. Joog shaqada ilaa wareeg waa complete. Ha hore shaqada ka tago oo aan oggolaansho. Xataa haddii ay jirto xaalad degdeg ah, u sheeg madaxdaada (ma ahan oo keliya saaxiib) ka hor inta aadan ka tegin. Marka aad rabto in aad maalmood qaadan off, la hadal Tababaraha ka hor wakhtiga. Haddii aad leedahay ballan, aad u hubiso in tababaraha ogyahay marka aad ka tageeyso iyo ugu soo laabtay. Qaar ka mid ah isticmaalka shaqo jadwalka (warqad ama internetka) si ay u muujiyaan marka qof kasta waa ka shaqeeya. Haddii aad shaqo isticmaalaa jadwal, calaamadee wakhtigii aad leedahay off. ilaa muujinaya marka aad u maleeyeen in uu yahay qayb muhiim ah oo guulo goobta shaqada.
4. Haddii aad xanuunsan tahay, u sheeg Tababaraha kooxda sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid
Haddii xanuunsan tahay inuu seegi doono shaqada, waa in aad wacdaa qofka aad u shaqayso wakhti shaqada la qorsheeyay ka hor. U sheeg inaad jiran tahay iyo in ay guriga joogaan. maamulayaasha qaar ka mid ah doonayaan in laga yaabo in aad email ama iyaga qoraal. Haddii aadan hubin waxa la sameeyo, weydii dadka kula shaqeeya aad. Sidoo kale, Shirkadda kastaaba wuxuu lahaa dhowr ah oo kala duwan oo maalmoodna waan bukay bixisay. Waxaa aad u fiican ma aha in ay qaataan ka badan lacagtaas.
5. Ma waxa aad Tababaraha ayaa sheegay in
Raac tilmaamaha aad Tababaraha kooxda. Markii ugu kaliya ma aha in aad samayn waxa aad Tababaraha ayaa sheegay in haddii ay idiin sheegaan inaad sameeyaan wax sharci daro ah. Haddii ay ku weydiisato in aad wax ka qaban ma aad samayn karto sababta oo ah sababo diimeed ama shakhsi, uma baahnid in aad loo sameeyo, laakiin waa in aad sharaxdo sababta. Si kastaba ha ahaatee, xusuuso inay caadi tahay in ay wadaagaan aad afkaarta iyo fikradaha. madaxda intooda badan waxay doonayaan in aad ka maqli haddii aad qabto wax wanaagsan si ay u wadaagaan.
6. Hubi in aad eegto xirfadeed
Haddii aad qabto labis, xirtaan joogga oo xajiya nadiif ah. Gasho joogga sida aad ayaa loo tababaray si ay u xiran. Hubi si aad u maydho-joogga ah iyo / ama u dhawraan sida nadiif ah sida ugu macquulsan. Haddii aadan xidhaan labis, ma xidhaan dhar isku mid ah laba maalmood oo isku xiga. Haddii aadan hubin sida ay u labistaan, eegto co-workers iyo iibsato dharka la mid ah. Haddii aad qabto in ay xirtaan dharka ganacsi, hubi in ay tahay nidaamsan iyo muxaafidka. Shirkadaha qaarkood waxay leeyihiin Jimcaha caadi ah, taas oo macnaheedu yahay aad u hesho in ay xirtaan dharka non-ganacsiga.
7. Ka caawi dadka kula shaqeeya iyo tababaraha
In shirkadaha yar yar, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo in aad qabatid hawlo badan oo kala duwan. Haddii aad tahay khasnaji a dukaan, waajibaadkaaga ka mid noqon kara nadiifinta musqulaha ah, qalajinta sagxada iyo qaadashada qashinka. Haddii aad qabto coworker ah fasax, laga yaabaa in aad ka mid ah waajibaadkooda. Tani nooca shaqada waa qayb ka mid ah iyagoo koox. Sidoo kale waa qayb ka mid ah sida si ay u guulaystaan ​​shaqada. Haddii aad tahay shaqaale koox wanaagsan, Tababaraha kooxda aad ka fekeri doonaa in marka ay jiraan fursado u-dalacaada ah.
8. Ha dhumban
Xanta waxaa leh wax xun ama wax gaar ah oo ku saabsan dadka kale u sheegay. Tani had iyo jeer waa fikrad xun shaqada. Haddii aad haysato waqti adag qof ka shaqeeya, la hadal qofka in. Isku day inaad ogaato sidaad u heli kartaa. Haddii ay Ma doonayo in aan ku dhagaysan adiga ama haddii ay cadhooday, u sheeg maamulahaaga. Isaga ama iyada ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay kaa caawiyaan inaad la hadasho mid kasta oo kale.
Haddii aad dareento in qof uu ku kadeedayo, ama dhaqankooda shaqada laga sameynayo aad dareento xun, la hadal maamulahaaga. Waxay isku dayi doonaa si uu u xaliyo xaaladda. Haddii aad u baahan tahay in la yidhaahdo wax xun, hadal qoyska ah ama saaxiib. Waxay ku siin karaan talo ah oo aan cidna la shaqada wadaagaan doonaa waxa aad sheegtay.
9. Runta sheeg
Waxaa aad u fiican in ay daacad ah ula aad Tababaraha iyo dadka kula shaqeeya. Haddii aad khalad samayso, waa caadi. kaliya waxaad dhihi kartaa in aad qalad sameeyay oo ah in aad adigu ka xumahay. Tan waxaa laga yaabaa adag oo laga yaabaa in si caadi ah in dalkaaga hooyo ma noqon. Laakiin tani waxay aad lagu qiimeeyo ee goobta shaqada American.
10. Ha isticmaalin maandoriyaha ama qamriga ka hor ama shaqada
Daroogada iyo khamriga waa mid aad u khatar ah ee goobta shaqada. Haddii aad ku isticmaasho, aad shaqada laga eryo doonaa. Shirkado badan oo ay leeyihiin siyaasadda dulqaadka daroogada iyo khamriga a. Taas macnaheedu waxa weeye haddii aad qabto hal mar, aad shaqada laga eryo doonaa. Haddii aad tahay xaflad shirkadda u adeegta khamriga iyo aad rabto in aad leedahay hal ama laba cabbitaan, waa okay. Haddii aadan rabin in khamriga, waa okay aad. Haddii dadka kula shaqeeya oo aad weydiiso sababta, run.
Baro free Ingiriisi xirfadeed online marayo GlobalEnglish
Hore ee Qaxootiga Sophia Vuelo noqdo Garsoore Hmong-American First Minnesota ee